kanjani amadoda iqanda? Umbuzo Yiqiniso, ongaziwa, kodwa kakhulu futhi ithakaseleka, uma uqonda ke, njengoba kufanele. Ake ukubhekana!
Lapho ekhaya lasebekhulile, ukukhanya livela ingane, le obelethisayo ngokushesha ukunquma ngubani phambi kwabo: umfana noma intombazane. Ngoba kulesi sihloko sinesithakazelo kwesikwenzayo isibunu wesilisa, sixoxe ngabo.
kanjani amadoda iqanda abafana ngaphandle?
Boys, abafana abadala kuyinto "sikhwama" encane isikhumba elise phakathi kwamathanga. Qamba ke - scrotum. Ngaphezu yangaphandle izitho zangasese (zangasese) ngaphakathi ngalinye leduna Omele ezifihliwe okuthiwa yangaphakathi ocansini izitho, ikakhulu - the testes basesimweni scrotum. Ake sixoxe ngazo ngokuningiliziwe.
kanjani amadoda Iqanda ngaphakathi?
Amasende - iyona ebaluleke kakhulu ucansi izitho besilisa basesimweni scrotum. Kuyini ejwayelekile - the isende kwesokudla kancane ephakeme kunaleyo ngakwesobunxele. Ngaphezu kwalokho, wabelane yabo phakathi ukwahlukanisa ekhethekile, ise scrotum.
Lokho amaqanda besilisa ekhiqiza isidoda - imbewu amaseli. Le nqubo iqala lapho efika umfana engu-10 ubudala. Isidoda abaningi kangaka futhi ngamunye kubo sincane ukuze kancane ebonakalayo ngesibonakhulu. Ngokusebenzisa eziyinkimbinkimbi yokwakheka isinyathelo amasende ukukhiqiza uketshezi main bonke abantu - isidoda. Eyaphi ku urethra ekhethekile, ngokusebenzisa owathela isidoda kanye nomchamo. Kuyini ejwayelekile - zombili lezi uketshezi akasoze uhlanganise.
Nokho, ngaphandle isidoda amaqanda besilisa ukukhiqiza ihomoni ekhethekile okuthiwa testosterone. Ibizwa nangokuthi i-hormone yokukhula. Uqala ukukhiqiza kubafana ngineminyaka engu-12 futhi kubangela ukukhula izinwele ngaphansi emakhwapheni, in the imbilapho kanye ngobuso bakhe, engene igazi womntwana. Ngaphezu kwalokho, lokhu i-hormone kuthinta izwi, okwenza kube rougher, kanye sibalo yomntwana kancane kancane waliguqula aze abe yindoda omdala. By the way, testosterone kunomthelela oqonde ngqo ku ukukhula kwezitho besilisa zokuzala - wenduku futhi scrotum. Mayelana usayizi womuntu nesithunzi Kamuva sizoxoxa.
Kungani amadoda kufanele ngaphezulu amaqanda ezihlobene ne ingozi yesifo senhliziyo?
Ososayensi wafinyelela esiphethweni ukuthi amasende ezinkulu ziyimbangela yokumelwa yinhliziyo. Amadoda anjalo kakhulu anda ingozi kokuba angene esibhedlela. Bona zithambekele umfutho wegazi ophakeme, kakhulu maningi amathuba okuthi athole isisindo, kodwa futhi othambekele ukusetshenziswa okuqhubekayo futhi zingalawuleki uphuzo oludakayo.
Mhlawumbe, akudingekile ukuchaza ngokuningiliziwe lokho amaqanda ezingabantu yintuthuko, kodwa kufanele kuqashelwe kwabaningi yabangela nezimpikiswano testes ezinkulu kanye izibikezelo izazi esesikhulume ngazo. Iqiniso ukuthi imiphumela yocwaningo lwalo namuhla kubhekwe impikiswano: indoda nge umthondo omkhulu abe ezingeni eliphezulu kakhulu okuzala, okuyinto ebonisa omkhulu impilo enhle.
Umbuzo ukuthi ibukeke amaqanda ezingabantu, iyashesha ukuzwela futhi obuseduze ne siqu. Ngakho-ke, ngeke ngenxa yezizathu eziphathelene nezimiso zokuziphatha ukuze etha ngaye ezingaphezu kuka Sengivele wachaza kulesi sihloko. Ngikufisela inhlahla!
Guard isosha laseRoma Khristolyubov, 6 Rota biography, imiklomelo
Soviet ukukhanya ithangi T-26. T-26: izici, umlando indalo, isakhiwo
Izindawo 30 ukubona kuze kube iminyaka engu-30